အင်းလေးကန်ကြီးမှာ ရေတွေ ပျောက်သွားတော့မှာလား…. – Alanzayar
အင်းလေးကန်ကြီးမှာ ရေတွေ ပျောက်သွားတော့မှာလား….
အင်းလေးကန်ဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကန်ကြီးတွေအနက် နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ကန်ကြီး တခုဖြစ်ပါတယ်။ အင်းလေးကန်ကို မှီခိုနေကြတဲ့ လူတွေ အများအပြား ရှိရုံသာမက တိရစ္ဆာန်၊ ပိုးမွှားနဲ့ သစ်ပင်စတဲ့ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ နေထိုင် ရှင်သန်ပေါက်ဖွားရာ နေရာ တခုဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် ဝန်းကျင်ကတည်းက အင်းလေးကန်ရဲ့ ဧရိယာ တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျလာတာကို ပညာရှင်များ သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင်များက အင်းလေးကန် ခမ်းခြောက်မှုကို အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေ သတိထားမိစေဖို့
စာတမ်းတွေရေးသားပြီး အသိပေးမှုတွေ လုပ်ပေမယ့် တခြားအကြောင်းအရာများရဲ့ အောက်မှာ အင်းလေးကန် ရေခမ်းခြောက်မှုဟာ ပျောက်ကွယ်နေခဲ့ရပါတယ်။
အင်းလေးကန် ရေခမ်းခြောက်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာရှင်များက ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ဖြေကြားထားတာများကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်-
အင်းလေးကန်ရေခမ်းခြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိမှာအဆိုးဆုံး အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ SAVE THE INLE LIKE အရပ် ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းက အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင် လတ် ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။
“အင်းလေကန် ကို ရေဝင်တဲ့အဓိကပင်မရေဝင် ရေထွက်တွေ တစ်ချို့မှာ ရေဝင်ရေထွက်မရှိတော့တာ၊ဇော်ဂျီ ချောင်း ရေကလည်း ဇော်ဂျီရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ပြီးကတည်းက ချောင်းရေ ကအင်းထဲ ကိုမဆင်းတော့ဘဲ ဒုတ္ထဝတီ မြစ်ထဲကိုစီးဆင်းသွားတယ်၊
ရေဝင်ပမာဏ နဲပါးသွားတဲ့အပြင်၊ မိုးများမှသာ ရေထုပမာဏ အများကြီးစီးဝင်မယ်၊စီးဝင်လာတဲ့ရေ ထုပမာဏက လည်း အင်းလေးကန်ကနေ လောပိတ ရေအားလျှပ် စစ် ကိုသွားတဲ့နေရာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၃၀လောက်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ မိုးဗြဲရေကာတာ
ရေအမှတ်နဲ့ အင်းလေးကန်ရေအမှတ်နဲ့ အနိမ့် အမြင့်က ၁၅ ပေလောက်ကွာခဲ့ပေမယ့် အခု ၂၅ပေလောက် ကွာ ခြားလာတယ်။ လောပိတရေ အားလျှပ်စစ်ကိုသွားတဲ့ဘီလူးချောင်း ကလဲ သဘာဝရေမှော်ပင်တွေ သေကုန်တယ်၊ ချောင်းတစ်ခုလုံးမှာ ရေမှော်ပင်တွေမရှိတော့ဘူး၊ ရေနည်းတဲ့အချိန်စက်လှေက ရပ်လိုက်တဲ့အချိန် မှာမြေတွေပွလာပြီးရေစီးနဲ့ပါသွားတော့ ချောင်းကနက်ဆင်းလာတယ်၊
ရေသဘာဝအတားအစီးတွေ တစ်ပင်မှ မရှိတော့ ရေစီးအရမ်းမြန်ပြီး အင်းလေးကန်မှာ ရေမကျန်တော့တဲ့အခြေနေဖြစ်နေတယ်”လို့ဆိုပါတယ်။ အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားအနီးဝန်းကျင် မှာ ၂၀၁၀၊၂၀၁၃၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွေက ရေခမ်းခြောက်မှုတွေရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် ယခုနှစ်က တော့ အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်မှီထိမ်းသိမ်းနိုင်ဖိုလိုအပ်လာ ပြီဖြစ်တယ်လို့ အင်းလေးကန်ထိမ်းသိန်းရေးအရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေက သုံးသပ်ထားပါတယ်။
လက် ရှိအချိန် မှာအင်းလေးကန်အတွင်းရေခမ်းခြောက်မှုတွေ ရှိလာတဲ့အတွက် ရေခမ်းခြောက်တဲ့တစ်ချို့ကျေးရွာတွေမှာ ရေလမ်းတစ်ခုထည်းအသုံးပြုနေရာက နေ အခုဆိုရင် ဘက်ဖိုးကား တွေနဲ့ ကုန်းလမ်းဖောက်လုပ်အသုံးပြုနေ မှုတွေရှိနေပြီးတော့
စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူတွေအနေနဲ့ လယ်ရေသွင်းမှုခက်ခဲတာ ရေအနက် ၃ပေအနည်းဆုံးရှိမှစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့ကျွန်းမျောစိုက်ခင်း တွေမှာ အခုဆိုရင်ရေအနက်၁ပေလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက် မြေကြီးနဲ့ထိပြီး၊လှေအဝင်အထွက်တွေခက်ခဲ လာတဲ့အတွက် အသီးအနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေသယ်ယူဖို့ အခက်အခဲတွေရှိနေ တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
အင်းလေကန်ခမ်းခြောက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ အင်းလေးကန်စိမ်းလန်းဆိုပြေရေး နယ်မြေတွေ ဖြစ်တဲ့ ပင်လောင်း၊ကလော၊တောင်ကြီး၊ကျောက်တစ်လုံး၊ရပ်ဆောက်၊ဟိုပုံး၊ဆီဆိုင်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအစားထိုး
သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုတွေမရှိတာ၊သစ်ထုတ်လုပ်ရေး တွေမှာလည်း ကုမ္မဏီခေတ်ကဆို တန်၅၀၀လောက်ပါမစ်ရပေမယ့် တန်၅၀၀၀လောက်ထုတ်ယူခဲ့မှု တွေရှိခဲ့တာ၊ဒါတွေကို ပြန်အစားထိုးစိုက်ပျိုးမှုတွေလိုအပ်နေ တယ်လို့သိရပါတယ်။
အင်းလေးကန်ဟာရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့အနီးမှာ တည်ရှိပြီးတော့ မျက်နှာပြင်ဧရိယာဟာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၄၄.၉မိုင်ရှိ တယ်လို့သိရပါတယ်။
Previous Article ပင်လယ်ပြင်မှာ ၅ရက်ကြာ မျောပါနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို တရုတ်သင်္ဘောကုမ္ပဏီက ကယ်ဆယ်ခဲ့
Next Article ပိုင်တံခွန်ပြောပြလာပြီ see more….